Noocyada iyo isticmaalka kiniinka ilmo soo ridka
Waxa jira labo nooc oo kiniinada ilmo iska saarista ah, midkastaana wuxuu leeyahay nidaam gaara oo isticmaal. Maayfbiriston wuxuu xidhaa dheecaanada loogu baahan yahay uurku inuu ku koro, halka waxyaabah lagu istcmaalo maysoborostol ay u shaqeyso iyadoo dabcineysa fureysana hareerta ilmo galeenka (albaabka ilmo galeenka) kuna sababeysa ilmo galeenka inuu ururo, taasi oo soo saareysa uurka.
Misoprostol waxay sababtaa in ilmo galeenku ururo iyo in uurku soo baxo.
Mifepristone waxay xanibtaa dheecaanka loogu baahan yahay uurku inuu ku horumaro.
Ha cabin hana cunin waxba muddo 30 daqiiqo si aad ugu ogolaato Misoprostol inay milanto. Ka dib markay 30 daqiiqo dhamaadaan waad cabi kartaa biyo si aad ugu liqdo hadhaaga kiniinka, guud ahaana, in alla intii aad u baahantahay biyo waad cabi kartaa ilaa aad oon baxaysid.
Waxa jira laba hab oo loo isticmaalo misoprostol: inaad dhigtid kiniinka gudaha siilka ama carabka hoostiisa. Sida loo isticmaalayaa waxay sheegaysaa inaad adigu kaliya ku isticmaasho misoprostol carabka hoostiisa sababtoo ah way ka asturnaan badantahay. (Kiniinku si dhakhso ah ayuu u milmayaa kagamana tagayo wax raad ah jidhkaaga) wuuna ka khatar yar yahay dhinaca caabuqa.
Hadii la is raaciyo mifepristone iyo misoprostol ama misoprostol oo kaliya way shaqaynayaan. Si kastaba ha ahaatee, hadii aad heli karto oo aad tahli kartid adigu waa inay wada qaadashada mifepristone iyo misoprostol ay noqotaa muhiimadaada koobaad.
Boqolkii kasta ee dumar ah 98 ka mid ah ayaa dhicin lahaa hadii la isticmaalo mifepristone iyo misoprostone. Ku dhawaad 95 dumar ah ayaa boqolkii kasta dhicin lahaa hadii misoprostone oo klaiya la isticmaalo.
Mifepristone iyo misoprostol wada jir ayaa loo isticmaalayaa waayo kiniinadu way is dhamaystirayaan midba midka kale. Dawadan la isticmaalayo misoprostol waxay kala fidinaysaa albaabka hore ee ilmo galeenka (afaafka ilmo galeenka) iyadoo sababta inuu ilmo galeenku isku soo ururo taasoo riixda uurka.
Hadii aad ku isticmaashid kiniinka misoprostol carabka hoostiisa , qofna ma sheegi karo inaad isticmaashay kiniinka ilmo soo tuurista, hadii aabad liqayso wax kasta 30 daqiiqo ka dib. Hadii qof ku waydiiyo waxaad odhan kartaa inaad si dabiici ah u dhicisay. Hadii aad ku isticmaasho misoprostol dhinaca siilka, waxaa laga yaabaa in dahaadhka kiniinku si dhamaystiran u milmin maalin ama laba maalmood gudahood. Hadii aad u baahato inaad hesho gar gaar caafimaad 48 saacadood ka dib markii aad qaadatay misoprostol xaga siilka, dhakhtarku waxa laga yaabaa inuu arko dahaadhkii cadaa ee kiniinka oo siilkaaga ku jira. Tani waa sababta ay warqada isticmaalka isticmaalka kiniinku ay u soo jeedisay in lagu isticmaalo misoprostol carabka hoostiisa oo aan lagu isticmaalin gudaha siilka.